Beesha Xawaadle oo Xujo ku noqotey shirka Gobolada Hiiraan & Jowhar – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Kulankan oo ahaa mid ay albabaada u xirnaayeen ayaa waxaa yeeshay Madaxweynaha Soomaaliya iyo Odayaasha Dhaqanka Beesha Xawaadle uu horkacayay Ugaaska Beeshaasi, waxaana kulanka ujeedkiisu ahaa sidii Odayaasha dhaqanka u ogolaan lahaayeen talooyin uu Madaxweynaha u jeediyay Odayaasha.
Ugaaska Beesha Xawaadle iyo Odayaasha kulanka ku wehliyay ayaa Madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdigiisa hordhigeen Shuruduo ay kamid yihiin in Gogosha shirka lagu soo celiyo Baladweyne iyo in la qabto Shir dib u heshiisiin ah ay isugu imaanayaan beelaha dega Gobolka Hiiraan.
Wararka aan heleyno ayaa sheegaya in Madaxda Dowlada uu ugu horeeyo Madaxweynaha ay arintaasi kabiyo diideen iyadoona ugu dambeyn markii wadahadalada la isku mari waayay ay Odayaasha ka baxeen xaruntii uu shirku kasocday.
Ugaaska Beesha Xawaadle Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble, oo shirka kadib Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in wax natiijo ah aysan kasoo bixin shirkii ay maanta la qaateen Madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdiga la socday.
Waxa uu sheegay Ugaaska in Odayaasha Dhaqanka Gobolka Hiiraan aysan u cuntamin qorshaha ay u yimaadeen Gobolka Hiiraan Madaxweynaha Soomaaliya iyo xubnaha la socda, waxa uuna tilmaamay in ay fashilmeen Wadahadalada Dowlada iyo Odayaasha Dhaqanka Gobolka Hiiraan.
Madaxweynaha Soomaaliya iyo Xubnaha la socda ayaa wali ku dadaalaya sidii ay u qancin lahaayeen Odayaasha Dhaqanka Gobolka Hiiraan gaar ahaan kuwa kasoo jeeda Beesha Xawaadle , waxaana wali magaalada ku sugan oo Dadaalo wada Madaxweynaha iyo Xubnaha la socda.